Isaaq Dagaal baa Deeqa | allsanaag
Isaaq Dagaal baa Deeqa
Isaaq in uu weerar ku soo qaado deeggaano ka mid ah gobolka Sool iyo Sanaag waa mid sababta koobaad ay leeyihiin qaar ka mid ah dadka u dhashay goboladaas oo beesha Isaaq ay iska soo hormariyeen. Marabida u shaqeeysa beesha Isaaqna waa kuwo aan kalla jeclleen sharafta dadkooda iyo dhulkooda toona.
Beesha Isaaq haddii ay doonayaan ineey goostaan waxeey aheed ineey ku ekaadaan dhulka inta ay ka daggan yihiin, laakiin siyaasiyiinta iyo cuqaashooda dhamaantood waa kuwo leh hal hadaf oo ah in ay maamulaan beelaha kalle ee aan Isaaqa aheen. Farkirkaan waa mid ay soo wadeen tan iyo siddeetameeyadii.
Waxaana dhab ah in beesha Isaaq haddii la yiraahdo isku qabiil ma nihin ee na daaya, dalka in la kalla gooyo ma doonneeno, ama haddii la yiraahdo illaahay ka baqa dhamaan waa mid lagala quustay oo aan anfaceen, balse waxa kalliya ee beesha Isaaq deeqaa waa in lala dagaalamo oo kalliya.
Arrinta dagaalkana waa in la ballaariyaa taladiisa uuna noqdaa mid laga soo shaqeeyay si dadkan dhulkan ku waashay afkooda looga gooyn lahaa. Marka waxaa loo baahan yahay in maamulka Puntland iyo shacabka labadaba ay ka fakiraan qorsho sal ballaaran taas oo aan aheen mid hanjabaad iyo xabado tuur tuur aan aheen, balse noqda mid mira dhala. Mar labaad waa in la oggaadaa, Isaaq dagaal mooyee wax kalle oo qanciyaa ma jiraan.
Dhinaca kalle, waa in laga fakiraa sidii laga yeeli lahaa dadka ay iska soo hormarinayaan beesha Isaaq ee u dhashay Daaroodka. Dadka qaar ayaa dhahaya haddii dagaal la qaado dadkayaga uun baa labada dhinacba ku dhimanaya. Haddii ay sidaa tahay, beesha Isaaq waxaa u shaqeenaya hadafkooda.
Balse haddii la doonayo in dhulkaan laga reebo, lagana saaro maskaxda beesha Isaaq waa in kuwa ay iska soo hormarinayaan iyo iyagaba la isla laayaa taas oo ah mid soo afjari karta sheegashada Sool iyo Sanaag. Hadaba, duullaanka ay beesha Isaaq ku soo qaadeen Tukaraq, waa mid soo afjari doonta kibirka beesha Isaaq.
← Sirqooyinka lunsan Shir ka dhacay buuraha Calmadow →